दिपाश्रीलाई माइतीबाट माग्नेबुढाले भगाए ! (भिडियो) « Ramailo छ
दिपाश्रीलाई माइतीबाट माग्नेबुढाले भगाए ! (भिडियो)
वरिष्ठ गायक राम थापाले गाएको सफल गीत ‘कति बस्छेउ माइतिकै कौसी’मा नयाँ भर्सन सार्वजनिक भएको छ । मुरारी प्रसाद लामिछानेको शब्द तथा संगीत रहेको गीतलाई युवा संगीतकार भिम विष्टले नयाँ स्वरुप दिएका हुन् । भिडियो :
कति बस्छेउ माइतिकै कौसीमा नयाँ भर्सनमा गायिका अन्जु पन्त र गायक हिमाल श्रेष्ठले स्वर दिएका छन् । छक्का पन्जा समुहले निर्माण गरेको भिडियोमा दिपाश्री निरौला, केदार घिमिरे, निर्मल शर्मा, बुद्धि तामाङ लगायत कलाकारहरुको अभिनय छ । कोरियोग्राफी विक्रम स्वाँरले गरेका छन् ।
हरि हुँमागाईंको छायाँकन रहेको भिडियोलाई टेकेन्द्र शाहले सम्पादन गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा छक्का पन्जा ४ चाँडै आउने जानकारी पनि दिइएको छ ।